Halis ku soo wajahan Muqdisho Iyo Gaadiid aan laga Fileyn oo la sheegay in lagu soo weerari doono? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Halis ku soo wajahan Muqdisho Iyo Gaadiid aan laga Fileyn oo...
Halis ku soo wajahan Muqdisho Iyo Gaadiid aan laga Fileyn oo la sheegay in lagu soo weerari doono?
Warbaahinta ayaa heshay Xog sheegeysa in Maanta la fasaxay ugu yaraan 750 oo ka mid ah Shaqaalaha KMG ah ee Garoonka Diyaaradaha sidoo kale waxaa la fasaxay Boqolaal ka mid ah Shaqaalaha Xarunta Xalane oo isugu jira Ajaaniib iyo Soomaali Sababo dhinaca Amniga.
Warbaahinta ayaa ogaatay in maalin ka hor Maareeyaasha Garoonka Muqdisho iyo Agaasimayaasha iyo Madax waaxeedyada Garoonka loo sheegay in Garoonka ama Xarunta xalane ay ku soo wajahan yihiin Al-Shabaab oo wata Gaadiidkii AMISOM ay qabsadeyn dagaalo Dalka ka dhacay lagana Cabsi qabo in toogasho toos ah ay ka dhacdo garoonka ama Xalane.
Dhowr qof oo ka mid ah Shaqaalaha KMG ah ee la fasaxay mudada dhowrka Maalmood ah oo aan la hadlay ayaa ii xaqiijiyay in la fasaxay mudo dhowr maalmood ah sidoo kale Shaqaalaha Rasmiga ee heysta Aqoonsiyada Dowladda ee aan Fasaxa Saameynin ayaa Warbaahinta u sheegay in saakay baaritaano xoog leh uu ka socda Xafiisyada Garoonka baaritaanada waxaa la sheegay in ay ka qeyb qaadanayaan Eeyaha sida gaarka ah u tababaran.
Qof ka mid ah Shaqaalaha KMG ah ee Garoonka Muqdisho oo la hadlay Warbaahinta ayaa Sheegay in lagu wargiliyay muddo dhowr maalmood ah in laga Fasaxay Shaqada.